डा. केसीले भने– ‘माफियामुखी ऐनभन्दा मृत्यु रोज्छु’ – Health Post Nepal
२०७५ पुष २९ गते १९:१३
पाँच दिनदेखि आमरण अनशनरत डा. गोविन्द केसीले मेडिकल माफियालाई पोस्ने र चिकित्साशिक्षाको गुणस्तरमा सम्झौता गर्ने कानूनभन्दा मृत्यु स्वीकार्य हुने बताएका छन् । खस्किँदो स्वास्थ्यलाई लिएर भेटका लागि आएका समर्थक एवं शुभेच्छुकले डा. केसीको स्वास्थ्यको प्रवाह गरिरहेको अवस्थामा उनले यस्तो प्रतिक्रिया जनाएका हुन् । ‘मलाई मेरो ज्यानको प्रवाह छैन्, म तीन करोड नेपालीको स्वास्थ्यमा सम्झौता गर्ने माफियामुखी ऐन स्वीकार्न सक्दिन्’ डा. केसीले हेल्थपोस्टसँग भने, ‘माफियामुखी ऐन भन्दा मृत्यु ठीक छ ।’ डा. केसीले थपे, ‘तीन करोड नेपालीको स्वास्थ्यमा कालो बादल लाग्ने विधेयक आउँदैछ, मेरो मात्रै स्वास्थ्य जोगिएर के गर्नु ?’ ।
सरकारले डा. केसीसँग गरेको सम्झौताविपरीत संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले अहिले भएका विश्वविद्यालयबाटै थप मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिनसक्ने बाटो खुल्दा राख्दै विधेयकमाथिको प्रतिवेदन पारित गरेपछि डा. केसी पुस २५ देखि आमरण अनशनमा छन् ।
उनले १५औं अनशनका क्रममा भएको सम्झौता प्रधानमन्त्रीकै संलग्नतामा भएको भन्दै त्यसपछिका विभिन्न भेटमा समेत सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने बचन दिएको स्मरण गरे । ‘अहिले नेताहरुका कालोधनलाई सेतो बनाउँन खोलिएका मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन जनतामारा र विद्यार्थीमारा ऐन ल्याउन खोजिँदैछ,’ उनले भने ।
‘माफियामुखी ऐन भन्दा मृत्यु ठीक छ ।’ डा. केसीले थपे, ‘तीन करोड नेपालीको स्वास्थ्यमा कालो बादल लाग्ने विधेयक आउँदैछ, मेरो मात्रै स्वास्थ्य जोगिएर के गर्नु ?’ ।
डा.केसीले दुई/तिहाईको दम्भले नेकपाका दुई अध्यक्षले देशमा विधिको शासनको धज्जी उडाइरहेको भन्दै उनले यो विषयलाई अन्तराष्ट्रिय करण गर्ने चेतावनीसमेत दिए । ‘सम्झौता र प्रतिवद्धता गरेका कुराहरु भुलेर जनतालाई धोका दिनहरुको निर्णय क्षमतामा प्रश्न उठिरहेको छ,’ डा. केसीले भने ।
उनले सम्झौताको हुबहु चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित भएर अन्य माग पूरा नहुँदासम्म आफू लडिराख्ने बताए ।
इलाममा दैनिक प्रदर्शन, ऐक्यवद्धता जनाउनेको घुँइचो
इलामस्थित सहरी विकास भवनमा अनशनरत डा. केसीको मागप्रति ऐक्यावद्धता जनाउँदै इलाममा दैनिकजसो प्रदर्शन भइरहेको छ । स्थनीय चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी तथा सर्वसाधारणको अगुवाईमा प्रदेश दिन समर्थनमा -याली भइरहेको स्थानीय पत्रकार सोम सुसेलीले जानकारी दिए ।
पाँचौ दिनसम्म इलामलगायत छिमेकी जिल्लाबाट आएका सयौं सर्वसाधारणले अनशनस्थल पुगेर ऐक्यवद्धता जनाइरहेका छन् । अनशनस्थलमा राखिएको पुस्तिकामा मात्रै हजारभन्दा बढि समर्थन मन्तव्यसहित हस्ताक्षर गरिसकेका छन् ।